Kenya oo beenisay in ay ciqaabto dhalinyarada ka tirsan Al-shabaab ee isku soo dhiiba | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Kenya oo beenisay in ay ciqaabto dhalinyarada ka tirsan Al-shabaab ee isku...
Kenya oo beenisay in ay ciqaabto dhalinyarada ka tirsan Al-shabaab ee isku soo dhiiba
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in aysan jirin wararka ay sheegaya sheegay in xarig iyo jirdil kula kacaan dhalinyarada ka soo baxsanaysa dhaq dhaqaaqa Al-shabaab.
Arintan ayaa soo ifbaxday kaddib markii ay dhalinyarada Kenya ee dega magaalooyinka xeebta dhaca ay bilaabeen in ay ka baxsadaan howlgalladda ciidamada Kenya oo la sheegay in lagu haayo dhibaateyn iyo dil sharciga ka baxsan.
Gudoomiyaha magaalada Mombasa Evans Achoki ayaa tilmaamay in dhalinyarada ka soo laabanaysa Al-shabaab ay gacan furan ku soo dhawenayaan.
‘’Ma dhibibaateyn doono,xukuumaddana waxa ay diyaar u tahay soo dhaweyntooda iyo in ay dhageysato Baahiyaha ay qabaan waxaan damanad qaadi doonaan amaankoodi mar haddii ay Dowladda isku soo dhibeen ayuu yiri Evans Achoki gudoomiyaha magaalada Mombasa.
Waxaa uu intaa ku darray in wadamada Syria,Iraq,Britten iyo Spain ay wajahayaan argagexiso balse aysan ku xadgudbin arimaha xaquuqda aadamaha waxana ay ku guuleysteen dagaalka argagexisada.
Booliska Kenya ayaa howlgalo balaaran ka sameenaya meelaha lagu tuhmayo inay dhalinyarada taagersan Al-shabab ay kasoo weerar tagaan,hay’adaha xaquuqda aadamaha ayaa ku eedeyay Kenya in ay si bareer ah u daldalayso dadka abriyada ah iyadoo saraakisha Kenyaanka ay arimahaasi beeniyeen.